Triptorelin Acetate Injection / Powder: Ndekupi kwandingaiwana? - Phcoker
2. Chii chinonzi Triptorelin Acetate chinoshandiswa?
3. Triptorelin Acetate inoshanda sei pauri?
4. Ndinofanira sei kushandisa Triptorelin Acetate?
5. Chii chaunofanira kuziva usati washandisa?
7. Mhedzisiro yekushandisa uchishandisa Triptorelin Acetate
8. Triptorelin Acetate yakandinakira here?
9. Ndekupi kwandingawane iyo Triptorelin Acetate?
Triptorelin Acetate inozivikanwawo seTriptorelin Acetate140194-24-7 isokisi remakemikari kemuchadenga rine akawanda sekondari uye epamusoro maratidziro kunzvimbo yepakati kabhoni atomu, Mukureruka, izvi zvinoreva kuti kune maatomu akawanda esimbi, mapoka anoshanda akabatanidzwa kune kabhoni. atomu muchimiro chemakemikari. Zvikuru neshoko rekuti 'Organic', zvinoreva kuti mamorekuru ane kabhoni atomu sepakati atomu. Chero organic yakakomberedzwa ine kuvepo kwekabhoni atomu uye ndosaka kabhoni iri kiyi yehupenyu.
Triptorelin Acetate inoshandiswa zvakanyanya seinodhaka uye zvakare nekuumbwa kwemakemikari murabhoritari. Iko kushandiswa kwemushonga kunonyanya kukosha nekuti yakanyanya kukosha. Iyo Triptorelin Acetate ine zvinyoronyoro acidic uye ine zvishoma zvishoma hydrogen donor rate seyakaenzaniswa neye hydrogen kugamuchira muyero. Iyo ine kemikari formula yeC66H86NXXUMXO18 uye avhareji atomiki molar mass ye15 gramu pane mole. Ivo vatengesi kana vanogadzira zvinodhaka vangashandisawo mazwi se decapeptyl, gonapeptyl nezvimwe, izvo zvinowanzoreva kuti Triptorelin Acetate. The kushandiswa kweTarttorelin Acetate mune yanhasi yakakurumbira, Mushonga uyu unoshandiswa kurapa chirwere chekenza cheprostate (Regedza endocrine glands mune yechirume inobereka muviri wemunhu). Kwete kenza chete asi inoshandiswa mumatanho epamberi ekushandurwa kwehomoni, testosterone control etc. Kuzivikanwa kushandiswa kweTriptorelin Acetate kana Triptorelin In injion, Inogona kubatsira chaizvo munyika yanhasi. Triptorelin Acetate inogadzira zvakare inopa pfungwa yekuti iwe unofanirwa kutora vanachiremba maonero ako usati watora mushonga.
Triptorelin Acetate140194-24-7 inowanzozivikanwa seTriptorelin jekiseni reTrelstar. Triptorelin jekiseni rinobatsira kwazvo pakurapa advanced cancer cancer. Triptorelin jekiseni rinoshandiswawo kugadzirisa mahormone muvana; Nyaya yekushandiswa ndeyekuti kana mwana akashanda zvakanyanya mukukura kwake uye mahormone ake anoburitswazve munguva pfupi isati yotungamira kune yekutanga kuyaruka, jekiseni reTrinctorelin rinoshandiswa kuderedza kuvhara kwehomoni. Uyu mushonga unouya pasi pehunyanzvi hwe Gonadotropin inosunungura mahormone yakapfupikiswa seGnRH. Izvo zvinobatsira kwazvo kudzora vana nekukurumidza kupfuura zvakajairwa kukura kwebonde. Mune mazwi akareruka, Triptorelin jekiseni rinoshandiswa kuderedza kusevha kwakanyanya kwekudzoreredzwa kwemuyedzo. Testosterone ihormoni inoshandira vanhurume pabonde mavara. Pane zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa zvakare izvo chiremba wako zvaangakukurudzira zvaunofunga nezvekuvharika kwako. Mumwe anofanirwa kutarisira mushonga sezvo mushonga wacho ungasashanda zvakafanana pamunhu wese, mhedzisiro inofanirwa kucherechedzwa zvakanyanya kana uchangotanga kushandisa mushonga.
Triptorelin Acetate zvakare inoshandiswa kurapa chirwere chechipfuva mumazamu. Chinhu chimwe chete chinofanira kucherechedzwa kuti iyo Triptorelin Acetate jekiseni haizobvisi masero ekenza pachezvayo, Inoderedza kukura kwehomoni kuitira kuti masero ekenza arege kupararira mukati memuviri wemunhu, Uku kurapa chete uko dzimwe nguva kunozova nemhedzisiro inononoka. Usakanganwa kutora nguva dzose kurapwa kwemuviri wako mumuviri uchishandisa mushonga uye chero mhando yekushungurudzika inofanirwa kutaurwa kunachiremba wako isati yawedzera uye kutanga kuratidza yakakura mhedzisiro.
Jekiseni rinotanga kuita kwayo nekufamba nemumatsipa uye rinogadzirisa kukura-inosimudzira mahormone senge testosterone etc. Kuita kwayo kwehutachiona pamahomoni uye nhengo dzekusunungura mahormoni kunogona kunge kusiri nengozi asi zvakadaro zvichitsamira pamwero weiyo mushonga nekusadzivirira. yemunhu. Kazhinji, mumwe chete dosi hairatidze mhedzisiro asi mwero wakatemwa nachiremba wako unozobatsira mukukura kwemutemo.
3. Zvinoita Sei Triptorelin Acetate wOrk pauri?
The Triptorelin jekiseni (Trelstar), mushonga wacho unoshanda pane endocrine glands uye inobvisa masero ekenza. Kana zvasvika kune cancer yeprostate yepamberi, zvinoreva kuti kenza yakapararira kune dzimwe nhengo kubva kumitezo yeprostate. Masero ekenza yeprostate anofamba kuburikidza neayo lymphatic system kuenda kune yako rectum, mapfupa uye bhebhi zvakare mune dzimwe nguva. Triptorelin Acetate pano inobatsira mukubvisa zvachose masero ekenza, Triptorelin Acetate inobatsira mukenza asi panguva ipi inotsamira pakudya kwako uye kusadzivirirwa.
Kana chiremba wako akatanga kutarisa kudzikiswa kwehomoni dzako, saka izvo zvinofanirwa kuve Triptorelin Acetate basa.
Kana chiremba wako akatanga kutarisa kupararira kwemasero ako kenza akamiswa, Ipapo izvo zvinofanirwa kuve Triptorelin Acetate basa
Kana iwe ukatanga kutarisa shanduko mukuonekwa kwako, saka izvo zvinofanirwa kuve Triptorelin Acetate basa
Mune mazwi akareruka Triptorelin Acetate ndiwo mumwe mushonga wakadai senge mumwe mushonga unowanikwa pamusika, unoshanda nekubata nenzvimbo dzakakanganisika mumuviri wako uye unobudirira wakananga kurapwa. Iwe unofanirwa kuve unoziva kwazvo nezveyero zvakare uye uye nguva iri pakati peimwe neimwe inoteedzana mishonga.
Kune zvakare yakawanda yeTarttorelin Acetate wongororo pane internet iyo inogona kutsanangura zvakadzama. Triptorelin Acetate mugadziri anodhinda kapfupi achishandisa peji yekubatsira yechigadzirwa.
Triptorelin Acetate (140194-24-7) inoshandiswa pakurapa kenza (kenza yeprostate) uye kukura kwemirairo yemahormone. Triptorelin Acetate mushonga unopihwa nachiremba wako sechimiro chejekiseni, kazhinji, jekiseni raizove kamwechete mumavhiki e4-ese (izvi zvinogona kusiyana pamamiriro ako ehutano nekusadzivirirwa). Iwe unofanirwa kuve wakangwarira mumupimo kuti udzivise chero zvisina kukodzera mhedzisiro. Kuti uwane mukana, ini ndinopa zano rekucheresa zuva rako mune khalendari uye nguva nenguva utore iyo Triptorelin Acetate jekiseni mune iyo chaiyo chiyero chemurwere wemhedzisiro yakanakisa. Urinary kuvharika ndiyo mhuwo yakajairika chiratidzo uchishandisa mushonga uyu. Mune iyi kesi, iwe unofanirwa kubvunza chiremba wako uye iwe unofanirwa kushandira izvi pamwe chete pakurangana kwako. Kunyange zvakadaro, izvi zvichave chete kune yekutanga mavhiki. Kugara wakaoma, Kugadzikana kwepfupa kunogona kunge kuri zvimwe zviratidzo pane izvi zvinoshandiswa kushandisa zvinodhaka asi unofanirwa kutaurira chiremba wako kana vachiramba vachiwedzera kurwadziwa. kunyangwe pasina akakuvara mhedzisiro mhedzisiro, Hapana chakaipa kuti uve parutivi rwakachengeteka iwe uchiedza mushonga mutsva. Usanyanye kutya zvakare, mushonga unoshanda pauri uye unogara uine tsigiro yechiremba. Panguva ipi neipi panguva yekurapwa, inzwa wakasununguka kuonana nachiremba wako nezve chero nyaya dzekurapa. Kushandiswa kuchatsanangurwa nachiremba wako uye ini nekupa zano nyoro kuti usakanganise neupi weupi dosi kana nguva yemushonga.
Kunyanya Triptorelin Acetate inoshandiswa nevanhu vari kurwara nekenza yeprostate kana yekutanga nyaya dzekukura. Vanofanira kuziva kuti chirwere chinogona kurapwa kana chasvika panguva yekurapwa. Ivo vanofanira nguva nenguva kubvunza ivo pachavo chiremba / nyanzvi maererano neparutivi-hunhu kana zviratidzo, Dzimwe nguva kurasika kwakanyanya-mugumo kunogona kukura kuva dambudziko guru. Izvi zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa usati washandisa chero zvinodhaka izvi semushonga. Murwere anofanirawo kuziva kuti Triptorelin Acetate jekiseni haizobvisi zvachose kenza zvachose, Inongomisa mahormone ayo anotadzisa kukura kwemasero ekenza. Mushonga uyu haubvise kenza mumuviri wako; Inoporesa nenzira inononoka uye yakatsiga nekusatendera kuti ikure. Unofanirwa zvakare kutsvaga Triptorelin Acetate wongororo. Kunyangwe kana paine yakanyorwa, hapana chakaipa pakutsvaga iyo Triptorelin Acetate wongororo pa internet.
Triptorelin Acetate dosage yakasarudzika yakasarudzika pane yakakomba nyaya uye hutano hwemurwere. Triptorelin Acetate dosage zvakare zvinoenderana nekusadzivirira kwemurwere.
1 Mwedzi Mwero
Triptorelin jekiseni kana Trelstar mushonga unoshanda kwazvo kana iwo mushonga wekurapa wakarairwa nemazvo.
Kwemwedzi mumwe unononoka kuburitsa mushonga, Trelstar inokurudzirwa kuiswa pa3.75mg ine 2ml mvura isina kusimba senge jekiseni. Izvi zvichaenderera kwemwedzi. Ichi chinofanira kunge chiri jekiseni remukati. iyo 3.75mg Triptorelin Acetate + 2ml mvura ichaita sehse peptide. Iyi dosage inotanga kuburikidza neropa mumitsetse yemasumbu tishu uye nekudzora huwandu hwehomoni pamhedzisiro.
Iyi dosage inofanira kuitwa uchishandisa 21 gauge sindano kana single-danho rekutakura system.
3 Mwedzi Mwero
Kwemwedzi mitatu inononoka-yekuburitsa mushonga, Trelstar inokurudzirwa kuiswa pa11.25mg ine 2ml yakanyungudutswa mvura isina kusimba senge jekiseni. Izvi zvicharamba zvichienderera mushure memwedzi mitatu yega yega. Ichi chinofanira kunge chiri jekiseni remukati. iyo 11.25mg Triptorelin Acetate + 2ml mvura ichaita sehse peptide. Iyi dosage inotanga kuburikidza neropa mumitsetse yemasumbu tishu uye nekudzora huwandu hwehomoni pamhedzisiro. Iyi dosage inofanira kuitwa uchishandisa 21 gauge sindano kana single-danho rekutakura system.
6 Mwedzi Mwero
Kwemwedzi mitanhatu-inononoka kuburitsa mushonga, Trelstar inokurudzirwa kuve yakabviswa pa22.5mg ine 2ml mvura isina kusimba senge jekiseni. Izvi zvicharamba zvichienderera mwedzi mitanhatu yese. Ichi chinofanira kunge chiri jekiseni remukati. iyo 22.5mg Triptorelin Acetate + 2ml mvura ichaita sehse peptide. Iyi dosage inotanga kuburikidza neropa mumitsetse yemasumbu tishu uye nekudzora huwandu hwehomoni pamhedzisiro. Iyi dosage inofanira kuitwa uchishandisa 21 gauge sindano kana single-danho rekutakura system. Triptorelin Acetate dosage inogona kusiyanana neizvi uye zviri nane kutora mazano ako echiremba.
Iwe unogona kushandisa Triptorelin Acetate mune chero yakasununguka dosage nguva. Asi iwe unofanirwa kuishandisa mushure mekubvumirana navanachiremba vane mvumo uye mushure mekutokupa mushonga uyu.
Paunotanga kushandisa mushonga wekuti Triptorelin Acetate, kunyanya kana iwe uchinge watanga kushandisa mushonga uyu izvi zvinogona kuwedzera kwenguva pfupi mahormone, aya ndiwo mamiriro akafanana nemamiriro ari kurapwa. Nekudaro, izvi hazvifanirwe kunge zvichinetsa asi kune zvimwe zvakakomba mhedzisiro izvo zvinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza. Urinal blockage, urination inorwadza uye ropa mukati mekupinda mune mamwe emhedzisiro yakaipa sezvo Trelstar inobata nenharaunda yeprostate. Izvi zvinoitikawo nekuda kwekuwedzeredza uye zvichave zvenguva pfupi sezvo muviri wako uchivaka immune system yayo kune iyo ichangobva kubudiswa mushonga. Triptorelin Acetate inogadzira haina chekuita nemabatiro aunoita.
Nekudaro, uyu mushonga haufanire kuve wakarairwa kune vakadzi vane pamuviri sezvo uchigona kunge uine zvinopesana pamwana.
Triptorelin Acetate inoguma nekuderera kukuru kwemahormone, Uye zvakare Triptorelin Acetate inoguma nekuderera kwekupararira kwako kwegomarara. Iwe unogona kunge uchinetsana nechero ipi yeiyi Triptorelin Acetate madhara.
Zviri nani kuti ubate chiremba wako nekukurumidza kana iwe ukawana chero cheizvi Triptorelin Acetate mhedzisiro:
Kuenderera mberi kwekutsvedza kunokonzera kutonhora, huoma yakaoma hukonzera kukosora
Dumbu rinogumbuka nekugara uchinzwa kurutsa
Dhigirii uye zvinetso zvekugaya.
Kurwadziwa kana chero mhando yekuzvimba kwemuviri munzvimbo yakakuvadzwa
Kuwedzera kwehuwandu hwemoyo neakakwira BP uye shuga mazinga
Kwete kugona kuita basa, muswe lag uye kuerera
Kurwadziwa kwemashure uye kushaya simba mumapfupa
Kuderera kwemasimba emuviri
Ndimi haigoni kunzwa kuravira
Fruity kunhuhwirira pamhepo
Kupisa kupisa uye kuwedzera kwekushisa kwemuviri
Musoro uye chizungu
Aya Triptorelin Acetate mhedzisiro mamwe akawanda mhedzisiro asi haisi iyo yakazara rondedzero. Vamwe zvingaitikawo zvichienderana nechero imwe mamiriro. Iwe unoyambirwa kuti ugare wakasvinura uye udza chiremba wako kune chero chero humwe rubatsiro.
Paunenge uchiri kutora uyu mushonga, Mushonga unotanga kuburikidza nemvura yemuviri senge iropa, urini etc. Zvinofanira kucherechedzwa kuti murwere ari kurapwa mushonga haafanire kubata chero api emvura iyi chero maawa e48. Magurovhosi eRubber (kune vanochengeta) anodiwa panguva yekushandisa mushonga.
Iwe unofanirwa kutaurira chiremba wako nezve ese mishonga iripo yauri kuenda nekuti Triptorelin Acetate inogona kuita nemamwe mishonga iyo ingangodaro isiri yakakwana pakurapa.
Triptorelin Acetate ndiyo yakakodzera iwe iwe iwe wakapa iwe unotambura nenyaya dzehomoni. Triptorelin Acetate inogona kushandiswa nemunhu wese ane dambudziko kunze kwevakadzi vane pamuviri. Kupfuurirazve, iwe unofanirwa kutora vanachiremba vako kuti vafunge nezve mushonga uyu sezvaangave achiziva nezvemuviri wako kwazvo. Chero nyaya ine chekuita nezvekurapa inofanirwa kukurukurwa nachiremba wako kutanga uye usazvifananidza newe pachako nekuenda mune imwe mishonga, iwe unogona kunge uine hutachiona hwakasiyana uye hwekudyira, munhu wese haana kufanana. Triptorelin Acetate inoguma nekurapa, uye kana uriwe uri kuida ipapo ndizvozvo kwauri. Triptorelin Acetate poda kana Trelstar, Kunyangwe izvi zvingave zvichinetsa. Triptorelin Acetate poda zvakachipa pane jekiseni. Asi jekiseni rakaratidza zviri nani mhedzisiro zvichienzaniswa neTrinctorelin Acetate poda.
Unogona kutenga Triptorelin Acetate kuzvitoro zvinodhaka zvezvitoro pane zvakanyorwa. Unogona kushanyira chero bazi re Phcoker kuti utore yako Triptorelin Acetate pamutengo unodhura. Nguva dzose tarisa chinyorwa uye zuva rekupera usati watenga Triptorelin Acetate.